Nkwukọrịta CP na-agbakwunye CamSTREAM SRT na-eto eto Red House Streaming Product Family | NAB Gosi News | 2021 NAB Gosi Onye Mmekọ na Onye Mmepụta nke NAB Show LIVE. Akụkọ Mgbasa Ozi Mgbasa
Home » News » Nkwukọrịta CP na-agbakwunye CamSTREAM SRT na-eto Eto Ezinaụlọ Red Streaming Streaming
Kacha ọhụrụ na-na-otu, nkwụnye na-play RHS CamSTREAM nlereanya kpọmkwem kwuru ala-latency REMI mmepụta workflows maka ndụ egwuregwu na ozi ọma; isi netwọk mgbasa ozi n'etiti mbụ ịzụta usoro maka mmepụta egwuregwu REMI
St. Petersburg, Florida, Eprel 8, 2021 - CP Communications, onye ndu na azịza na ọrụ ọhụụ maka ihe omume mmemme, na-aga n'ihu ịgbasa ya Red House Streaming (RHS) CamSTREAM ngwaahịa ezinụlọ iji zute mgbanwe mmepụta REMI chọrọ. Companylọ ọrụ ụlọ ọrụ taa na-ewebata CamSTREAM SRT, ihe niile dị n’ime ime na ngwangwa nke edoziri maka egwuregwu egwuregwu ugbu a na ihe ịma aka mmepụta akụkọ.
CamSTREAM SRT na-aga n'ihu n'okporo ụzọ CP Communications guzobere na ngwaahịa dị ugbu a: Ngwakọta niile, nkwụnye na-egwu egwu nke na-anabata ịdị mfe maka ndị ọrụ njedebe ọkwa ọkwa ọ bụla. Dị ka ụdị ndị gara aga, CamSTREAM SRT na-enye ndị okike ọdịnaya ihe ngwọta ntụgharị (igwefoto PTZ na tripod, encoder vidiyo, nkwụghachi azụ) iji gbaa égbè, ndekọ na iyi ọdịnaya dị ndụ. Uru dị iche iche gụnyere itinye ngwa ngwa, ịdị mfe nke iji, yana ọnụego-arụmọrụ maka nrụpụta nke ụlọ, na-achọ naanị njikọ ịntanetị ọhaneze iji bulie kọntaktị enwetara na studio ma ọ bụ web.
Ugbu a na-ebugharị ma na-enweta n'ụwa niile, CamSTREAM SRT na-ejikọ teknụzụ ọhụrụ na atụmatụ ndị na-ekwu banyere ịdị larịị na ịma aka dị mma nke metụtara egwuregwu na ndụ na mmepụta akụkọ. Nke a bụ sistemụ RHS CamSTREAM izizi iji kwado usoro njem njem vidiyo na -edokwa ntụkwasị obi (SRT), nke Haivision mepụtara ma bụrụkwa ọsụ ụzọ, nke na-eme ka arụmọrụ gụgharia gafee njikọ ịntanetị ọhaneze enweghị atụ.
CamSTREAM SRT bụkwa nke izizi RHS CamSTREAM sistemụ iji mejupụta encoder Haivision nke Makito X2, nke na-akwado iyi iyi adịghị oke ala ma guzobe ọwara VPN dị nchebe gaa na site na ụlọ ọrụ studio na mpaghara mpaghara (LAN). Mgbe ejikọtara ya na ihe ngosipụta nke Haivision Makito X2, ndị ọrụ eweghachila vidiyo na nyocha 10 nke anụ ọhịa tinyere ọdịyo IFB. Enwere ike ịpinye encoder Makito X2 maka Mobile Viewpoint Agile Airlink agwakọtara sistemụ koodu mkpụrụ ndụ ebe njikọ LAN adịghị. Nkwukọrịta CP bụ onye nkesa na North America maka ngwaahịa Haivision na Mobile Viewpoint.
Onye isi oche Nkwukọrịta CP Kurt Heitmann na-ekwusi ike na iyi nkwụsị bụ isi nchegbu maka egwuregwu na ndị ahịa akụkọ na-agbanwe agbanwe na usoro mmepụta REMI. Usoro nhazi nsogbu nke CamSTREAM SRT iji bie ndụ na-enweghị nsogbu metụtara otu n'ime netwọkụ mgbasa ozi kachasị ukwuu na North America ịzụta usoro atọ, nke a ga-eji maka mmepụta REMI na nkwado nke ndụ, egwuregwu baseball televised.
Ọ sịrị, "Njedebe oge njem bụ ihe mgbu maka ndị okike ọdịnaya niile, gụnyere ndị mgbasa ozi kachasị ukwuu taa." “Ugbu a, anyị nwere ike ịnye ndị ahịa anyị SRT iyi nke na-ebelata latentị na-erughị 500 milliseconds. Nke a na-atọ ntọala maka ezigbo oge, mkparịta ụka abụọ na-eme ma na-akpali ndị na-ekiri ya, ọbụlagodi mgbe onye na-akpọ egwuregwu site na-play, onye na-ekwu okwu agba, ma ọ bụ arịlịka akụkọ na-arụ ọrụ site n'ụlọ. Osimiri SRT na-eme ka igbu oge a na-ahụkarị banyere ịkọ akụkọ na egwuregwu gaa n'oge gara aga. ”
Ndị na-emepụta ọdịnaya na-ejikwa ihe nrụpụta n'ụlọ na-erite uru site na ọrụ igwefoto atọrọ atọ nke na-eme ka ọ dịrị nfe ịkwanye akụkụ igwefoto na ikike niile a na-achụsasị. Ka ọ dị ugbu a, njikwa igwefoto na shading na-enye ndị ọrụ ntanetị ohere ịme mgbanwe oge na ụlọ studio iji bulie mkpuchi. Heitmann na-agbakwụnye na ndị na-ede akụkọ nwere ike itinye CamSTREAM SRT ngwa ngwa n'ọhịa ma weghachite eserese na studio na-enweghị mkpa maka onye ọrụ igwefoto ma ọ bụ akụkọ akụkọ.
Ọ sịrị, "Dịka ụdị RHS CamSTREAM niile, ọ dị ka ijikọ na ike ma gbanye sistemụ ahụ". "CamSTREAM SRT na-akpọ ụlọ, na n'ime nkeji ole na ole ọ dịlarị njikere ịse na iyi vidiyo na-agbasa ozi."
CamSTREAM SRT na-ewepụtakwa nhọrọ ọhụrụ maka ndị ahịa RHS CamSTREAM, gụnyere nhọrọ maka teleprompting dịpụrụ adịpụ na njikwa ọkụ DMX. Onye nke a na-ekwusi ike na igwe ojii nke DMX na-achịkwa igwe ojii iji gbanye ọkụ ma gbanyụọ, gbanwee agba ọkụ ma dozie nchapụta, n'etiti ntọala ndị ọzọ. All DMX akara na-nyeere n'elu IP n'etiti studio na n'ime obodo mmepụta saịtị site na iji otu nchebe Okwey ọwara. Heitmann na-agbakwụnye na nhọrọ abụọ ahụ ga-adị maka ụdị RHS CamSTREAM niile.
Banyere CP Communications
Ruo ihe karịrị afọ iri atọ, CP Communications ewetawo ihe omume omume mmemme dị oke ọnụ, na-efu ọnụ maka ndị isi mgbasa ozi, egwuregwu egwuregwu na otu, yana ụlọ ọrụ na-emepụta ihe na mmepụta. Ihe ngwọta anyị gụnyere ịnweta ndị ọkachamara nwere ahụmịhe, steeti nke ngwa ọrụ ọgbara ọhụrụ, na teknụzụ ọhụụ na usoro maka nnweta ọdịnaya ọdịyo na vidiyo, nnyefe na nnyefe. Omenala anyị nke ihe ọhụrụ, tinyere ụkpụrụ mmesi obi ike kachasị elu na agụụ maka ọrụ ndị ahịa, na-akwalite mmekorita ya na ndị ahịa anyị iji chọpụta usoro kachasị mma maka mmemme ọ bụla dị ndụ.
Previous: WAMU wetara Redio na Ndị Ntị na Ndị Ntị Nụrụnụ na ENCO enCaption4
Osote: Clear-Com's Eclipse HX Version 12.1 Na-anapụta IP Enwekwukwa na Ike Ikuku, Streamlines Use of 5 GHz Band for FreeSpeak Edge